Olee otú Iji Nweta A Free naa System Site Harbortouch | Golden Web Awards
site Darin Carter | Jun 13, 2018 | Ka | 0 comments
The naa (Point of Sale) System bụ otu n'ime ndị kasị mkpa akụkụ nke retail na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ulo oru, ụbọchị ndị a. Inwe gị onwe gị na ahaziri naa usoro n'elu ndekọ ego-enyere gị aka na-niile zuru ezu sales akụkọ. N'ihi ya, ya dị ukwuu n'ihi na onye okwu ugwo nakwa maka accountants. Nke a naa software na-enyere gị aka inyocha niile nkọwa ndị dị otú ahụ dị ka ihe rere, na-enye na n'ọkwá ọ bụla ihe, oge nke ya ire na aha onye okwu ugwo oke. Ọ na-enye ihe ziri ezi na ya mere na e nweghị Ohere nke emehie. Ị nwere ike nweta free naa usoro si Harbortouch maka retails, salons, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na nkpọrọ nakwa dị ka ma ọ bụ obere ulo oru.
Gịnị Harbortouch Nye?
Harbortouch na-enye gị a zuru naa usoro ngwọta. Ọ na-agụnye naa ngwaike, Naa software nakwa dị ka integrated ahịa ọrụ nke bụ zuru okè n'ihi na ọ bụla obere ulo oru, mkpọsa na-echekwa, salons na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ oriri na nkwari. Ị adịghị na-eji awa na-eme nnyocha banyere ihe dị gị mkpa maka azụmahịa gị. Harbortouch ajụ gị ụfọdụ bụ isi ajụjụ ị ga-aza. mgbe, ha ga-amarakwa ihe ụdị usoro ị n'ezie mkpa maka azụmahịa gị ma ọ bụ ụlọ ahịa. Na a di ntakiri ụgwọ i nwere ike inwe oké ọrụ ha.
Harbortouch enye iche iche naa usoro maka gị dị iche iche azụmahịa mkpa. Ị nwere ike ịhọrọ ihe kasị mma dabeere na ihe ụdị azụmahịa i nwere. Onye ọ bụla nke naa usoro nwere dị iche iche atụmatụ na-ekpuchi iche iche mkpa na chọrọ nke ahụ azụmahịa. Ya mere, pịa na et Malitere maka Free 'nhọrọ ma zaa ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ha na-ajụ. N'ebe a, ha ga-arịọ gị banyere ụdị azụmahịa i nwere dị ka n'uwe ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, hotel ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Ụlọ Mmanya ma ọ bụ nri ụlọ ahịa etc. Ozugbo ị dechara aza niile ajụjụ, ha ga-zipu gị free Mbido ngwa.
Olee otú Iji Nweta The Free naa System?
Ọ bụ nnọọ mfe inwe free naa usoro gị mkpọsa na-echekwa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ si Harbortouch. Ị ga-eso ndị dị mfe ma dị mfe iji nweta ya. Ndị a bụ:
Kpọtụrụ Harbortouch: Ị ga-ebu ụzọ kpọtụrụ ndị Harbortouch n'ihi na naa usoro maka free. n'ihi na, i nwere na-eme ihe maka free mgbe nke ire-enye. nweta Ihu: Ozugbo ị etinyere maka free mgbe nke ire usoro, i nwere na-eche maka ha ihu ọma. Mgbe ị na-mma maka free software na ngwaike, ị na-ọma na-aga. Ị dị nnọọ ga-akwụ ụgwọ a kwa ọnwa ego na-ekpuchi na nkwado na services.Free nwụnye: Ị ga-enweta a free echichi si Harbortouch na J.Randall ha gbaara technicians. All ndị technicians ha na-ọma-azụ ma gbaara. N'ihi ya, ị ga-enweta a ukwuu, na enweghị nkebi ọrụ.
Yana na ị ga-enweta ndụ akwụkwọ ikike na ngwaike. E nweghị ndị ọzọ n'ihu na-akwụ ụgwọ. Ị ga-enweta free onsite echichi, free menu mmemme nakwa dị ka free akwụkwọ onunu. Ozugbo ị ọ arụnyere, ị ga-enweta nke kacha mma nkwado si ha mkpara.
Mere Iji Họrọ Nke a?
Ịhọrọ free n'ókè nke ire usoro site Harbortouch ga-enyere gị na ọtụtụ ụzọ. Ị na-adịghị na-eji ọtụtụ awa na-eme nnyocha maka kasị mma ọrụ na-enye naa software na ngwaike. Harbortouch na-enye gị ihe kasị mma na klas Point of Sale usoro gị mkpọsa na-echekwa, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Mmanya na spas, obere ulo oru na cafes. Ọ bụ ihe kasị hassle-free ọrụ na ị nwere ike mgbe nweta. Ị dị nnọọ nwere na-etinye maka usoro ihe omume online. Ị ga-ahụ na-enweta na-naa ngwá tinyere free echichi na dịghị n'ihu na-eri. Ọbụna ọnwa ọrụ na nkwado ego na ị ga-akwụ bụ nnọọ obere. Nke a di ntakiri ego ga-ekpuchi nile dị oké mkpa ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ahịa na-achọ ndị kasị mma na ndị kasị dị irè naa usoro, mgbe Harbortouch nwere ike inye gị na na. Ị nwere ike ide maka free naa usoro awa site ha. Ọ na-agụnye free software na ngwaike dabeere na gị azụmahịa. Ọ na-abịa na niile dị oké mkpa atụmatụ dị mkpa maka ọsọ azụmahịa gị na-enyocha gị ahịa were were. Ya mere, a na-azọpụta a otutu gị oge bara uru dị ka nke ọma dị ka ego. Harbortouch ike na-elekọta gị niile naa usoro mkpa na chọrọ rụọ ọrụ nke ọma.